Oké Osimiri Aísa. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Who Seeen a Mermaid? | Akwụkwọ ugbu a
Oké Osimiri Aísa. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Who Seeen a Mermaid?
Foto: site n'ikike Mar Aísa Poderoso.
Oké Osimiri Aísa O sitere na Zaragoza, onye prọfesọ nwere asambodo na akụkọ ihe mere eme na onye edemede. Akwụkwọ akụkọ ọhụrụ ya bụ ¿Hasnye hụtụrụla otu nwanyị? Na nke a Ajụjụ ọnụ Ọ na -agwa anyị gbasara ya, ọrụ ya, ọdịmma ya na ọrụ ya. Daalụ nke ukwuu maka obiọma gị na oge gị.
Mar Aísa Poderoso - Ajụjụ ọnụ
AKWỤKWỌ AKWỤKWỌ TAA: Akpọrọ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ gị ¿Hasnye hụtụrụla otu nwanyị? Kedu ihe ị na -agwa anyị gbasara ya ebee ka echiche si malite?
Oké Osimiri Oké Osimiri AÍSA: Ọ bụ ikpe nke abụọ nke ụmụnna Cárdenas, nke enwere ike ịgụ na -anọghị na nke mbụ, Dostoevsky na ahịhịa. Ha bụ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme noir, nke edobere na Logroño, obodo m biri afọ iri abụọ na isii, yana kpakpando. Diego Cárdenas, osote onye uwe ojii na nwanne ya nwanyị, Lucía, onye ntụgharị okwu. Ha abụọ nọ n'oge ihe isi ike, enweghị mmasị na ndụ. Kpọmkwem nkwado ibe ha na njikọ ha na idozi okwu ga -eduga ha ịchọta onwe ha, ntakịrị ntakịrị.
Enwekwara microcosms dị iche iche nwere ndị na -agụ akwụkwọ nke abụọ bụ ndị nwetaworo ịhụnanya nke ndị na -agụ ya dị ka onye na -enyocha ndị uwe ojii, ndị uwe ojii ibe Diego, ma ọ bụ Lucía n'ụlọ ọrụ ntụgharị okwu. Amalitere m ide okwu nke abụọ a, ọbụlagodi tupu ebipụta akwụkwọ akụkọ mbụ, n'ihi na ekwenyesiri m ike na ndị odide a nwere ọtụtụ njem; Mụ onwe m chọrọ ịma ụzọ ha ga -aga.
Mmalite nke akwụkwọ akụkọ m na -eji ihe onyonyo abịakwute m, ọkụ. N'ọnọdụ a, ọ bụ nke obere nwaada na -eme na Gothic facade nke San Bartolomé, ụlọ ụka mara mma nke dị n'etiti Logroño. N'ebe ahụ akwụkwọ akụkọ ahụ na -amalite. O chere ihe ịma aka ihu nke ijigide isi ihe nke mbụ, mana inye ya ihe ọhụrụ.
N'okwu a, Diego na -eche ihu nke di na nwunye meworo agadi nwụrụ anwụ n'ụlọ ya, n'ihe yiri ka ọ bụ ikpe doro anya nke ime ihe ike nwoke na nwanyị. Nchọpụta ụfọdụ akwụkwọ ozi ochie zoro ezo na tebụl mgbakwasa, yana atụmatụ nke ụfọdụ nhọpụta pụrụ iche na onye na -akọ ọdịnihu pụtara, ga -eduga na nyocha. Ntọala akwụkwọ akụkọ ahụ na -akpọgakwa anyị ebe dịka Paris ma ọ bụ Zaragoza, obodo m, nke ihe nkiri na -apụta mgbe niile.
Ndị na -agụ akwụkwọ ozi na -ezitere m echiche ha; ha hụrụ ya n'anya ma na -enwe ekele maka itule n'etiti atụmatụ na -adọrọ mmasị, mkpụrụedemede ha nwere ahụ iru ala ma chọọ izute, ikuku na mmetụta. Ọ dị m ka ọ dị mkpa na, na mgbakwunye na nkata ahụ, onye na -agụ ya nwere ike ịnụ ụtọ ma chọta akụkụ ndị ọzọ na -aga n'ihu na -emegharị mgbe ọ gwụchara. Ihe ọzọ dị iche bụ na -ekwu maka nka, akụkọ ihe mere eme ma ọ bụ sinima kpochapụwo, agbakwunyere na akụkọ n'onwe ya.
Ọ masịrị m na ha na -agwa m na ha chọrọ imecha ya iji chọpụta ihe omimi, mana na, n'otu oge ahụ, ha na -enwere ha ọmịiko n'ihi na ahụ na -adị ha mma nke ukwuu n'ime akwụkwọ akụkọ. Agaghị m ekpughe karịa, ọ ka mma ka ndị na -agụ akwụkwọ n'onwe ha chọpụta ya n'onwe ha.
MAAP: Ana m ede maka na abụ m onye na -agụ ihe. Onye na -agụ akwụkwọ nke na -enwe obi ụtọ n'ịgụ ihe kemgbe ọ bụ nwata. Tupu m mụta ịgụ ihe, ana m echeta akụkọ nne m ochie gwara m tupu m lakpuo ụra. Mgbe ahụ wee bịa Akụkọ banyere ọnwụ Ferrándiz. Emechaa Enid Blyton, Victoria Holt… N'ikpeazụ, wụlikwa elu na narị akwụkwọ nke nna m nwere n'ụlọ ahịa akwụkwọ. Obi abụọ adịghị ya, Agatha Christie Ọ bụ nnukwu nchọpụta. Mgbe e mesịrị, ndị edemede ndị ọzọ dịka Pearl S. Buck, Leon Uris, Mika Waltari, Colette, wdg. Site na mgbe mbụ m na -eso nna m aga Friday ọ bụla na -ere akwụkwọ ma na -azụ akwụkwọ abụọ n'izu. N'ihi ya, amalitekwara m ịhazi ọbá akwụkwọ nke m. Echetara m ya dịka ọ happinessụ dị ọcha.
M dere akụkọ mbụ m mgbe m dị afọ asaa, na abụọ nke EGB. Echetere m n'ihi na nkuzi ahụ onye nkuzi m nyere m ka m gụọ n'ụlọ nke ya Obere Onye isi; Ọ dị m ka nwata nwanyị nwere anụrị n'ụwa. Nke a gbara m ume ide akụkọ nke m n'ime akwụkwọ ndetu nke nne m ji akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na akwụkwọ na -acha anụnụ anụnụ.
N'oge uto, na klas ụfọdụ nke ọ na -esiri anyị ike itinye uche na ha, ka o dere Akụkọ ịhụnanya maka ndị enyi m, etinyere na obodo ha họọrọ, nke ọzọ dabere n'echiche m. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụ ụdị nke m na -emetụbeghị aka ọzọ.
Laghachi na 2001 Ekpebiri m ide akwụkwọ mbụ m. Maka ọzụzụ m nke BA na akụkọ ihe mere eme Enwere m mmasị na akụkọ ihe mere eme ụdị. Etinyere m ya akwụkwọ nrite dị egwu, n'ezie, emerighị m. Agbanyeghị, ọ masịrị m nke ukwuu na njem ahụ na Madrid iji nyefee onye na-ebi akwụkwọ n'onwe ya ihe odide ahụ. Ọ bụ ahụmịhe tọrọ ụtọ na agaghị echefu echefu.
MAAP: Enweghị m ike ịhọrọ otu; Enweela m ọtụtụ ndị ode akwụkwọ, ndị m gụrụ akwụkwọ ha na ọkwa na oge dị iche iche na ndụ m.
Enwere m mmasị n'akwụkwọ nke XIX na ọkara mbụ nke XX: Jane Austen, las Bronte, Flaubert, Stendhal, Balzac, Oscar Wilde, Tolstoy, Dostoevsky, Emilia Pardo Bazan, Clarin, Wilkie Collins, Edith Wharton, Scott Fitzgerald, Forster, Evelyn Waugh, Agatha Christie or Némirovsky.
Ka oge na -aga, enwere m ike ịkọwa ọtụtụ ndị ọzọ: Isabel Allende, Carmen Martin Gaite, Paul Auster, Donna Leon, Pierre Lemaitre, Fred Vargas na ọtụtụ ndị ọzọ. Ha niile nwekọrọ ọnụ na ha emeela m obi ụtọ, tụgharịa uche ma ọ bụ kpalie m. Onye ọ bụla n'ime ha hapụrụ m akara; Amụtala m ha niile. Na njedebe, a na -ewu ụdị onye edemede site n'àgwà ya, ahụmịhe ya na, n'ezie, ịgụ ihe.
MAAP: Aga m ahọrọ abụọ: Anna Karenina, nke ọ ga -eji enwe mkparịta ụka gbasara ndụ na ịhụnanya. Ọ ga -amasị m iso ya jee n'okporo ụzọ St. Petersburg, n'agbanyeghị na echere m na mgbe anyị risịrị tii, nnukwu Tolstoy nwere ike were iwe na njedebe.
Omume ọzọ m ga -achọ ịnụ ụtọ mgbede bụ na nnukwu gatsby. Ọ gaghị amasị m ịgagharị New York na ụlọ ọrụ gị. Ọ na -adị m ka ndị na -adọrọ mmasị, juputara na ọkụ na ndo, nke nooks na crannies, nke nuances.
MAAP: Ọ masịrị m, ma ọ bụrụ na ọ nwere ike, dee naanị ma gbachi nkịtị, mana m na -emegharị ahụ. Dị ka akụkọ ihe mere eme, m ga -agwa gị nke ahụ Hasnye hụtụrụla otu nwanyị? Emechara m ya na Zaragoza, anọdụ ala n'elu sofa, a tụrụ m mkpọrọ n'azụ matarasị nke dị n'ọnụ ụlọ mmadụ juru, ebe di m na ụmụ m na -ese ma na -achịkọta arịa ụlọ. Mgbe ụfọdụ ị nweghị ike ịhọrọ.
Iji gụọ naanị m chọrọ ezigbo akwụkwọ, ndị ọzọ enweghị mmasị m.
MAAP: E nwere ebe m na -elekwasị anya nke ọma. N'ụlọ m Logroño Enwere m ntakịrị desktọọpụ n'ihu windo nke m na -ahụ ka osisi na -ama jijiji, ndị mmadụ na -abịakwa na -ala; Ọ bụ ebe na -eme m obi iru ala na ebe enwere m ahụ iru ala. N'ime okpomọkụ, Ọ na -atọ m ụtọ nke ukwuu ide ihe n'ụlọ m na Medrano ebe m nwere ụfọdụ mara mma Ugwu Ugwu. Ebe ahụ ka m bidoro Hasnye hụtụrụla otu nwanyị? Otú ọ dị,, Dostoevsky na ahịhịa Ọ bilitere n'oge ezumike na Vinarós. Ndị Mar ọ dịkwa egwu nke ukwuu.
Banyere oge ụbọchị, ọ masịrị m ide na ụtụtụ mbụ, mgbe onye ọ bụla ka na -ehi ụra, ụlọ ahụ agbachi nkịtị. Oge ọzọ m na -ejikarị eme ihe bụ n'ehihie. Ọ dịghị na mgbede, mgbe ahụ, m na -ahọrọ lear. N'ọnọdụ nke m, ịgụ akwụkwọ na -azụ m ịga n'ihu na -ede ihe. Ọ bụ ihe a na -eme kwa ụbọchị.
A bụ m onye nkuzi na m ga -eme ka ọrụ m na ndụ ezinụlọ m dị n'otu, mana Ana m agbali ide kwa ụbọchị, ọbụlagodi na ọ bụ naanị okwu ole na ole. Ekwenyere m, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, na ị nwere ike wepụta oge maka ihe na -amasị gị ma nwee mmasị na ya.
MAAP: Dịka onye na -agụ akwụkwọ, ahụrụ m ya n'anya ịkọ akụkọ ọ na -atọkwa m ụtọ akwụkwọ akụkọ ihe mere eme. Anaghị m achịpụ iwepụta onwe m otu ụbọchị dịka onye edemede nwere ụdị ndị a.
MAAP:Ana m agụ Mmuo, nke Ashley Audrain dere. Ọ bụ akwụkwọ akụkọ na -atọ ụtọ, nke mbụ. Ihe na -akpali mmụọ nke na -ekwu maka ịbụ nne ma na -akpali akpali, anaghị ahapụ gị enweghị mmasị. Site na nkọwa akụkọ, iji onye na -akọ akụkọ na onye nke mbụ na nke abụọ na -atọ ụtọ nke ukwuu, yana oge na -awụlikwa elu. Ana m akwado ya, obi abụọ adịghị ya.
Anọ m na okwu nke atọ nke ụmụnna Cárdenas, nke dị na mmiri. Dostoevsky na ahịhịa na -amalite n'oge mgbụsị akwụkwọ na Hasnye hụtụrụla otu nwanyị? na udu mmiri. Agbanyeghị, enwere m echiche ọhụrụ na -afụ n'ọnụ m. Maka onye edemede enwere oge na -atọ ụtọ: mgbe ị chere na ị nwere ike ịbịaru ezigbo akụkọ nso.
MAAP: Obi abụọ adịghị ya na ọnụego mbipụta es kwụ ọtọ. Enwere otu ndị na -ebipụta akwụkwọ siri ike nke na -achịkwa ahịa na ọtụtụ ndị nta na ndị nta akụkọ ga -asọrịta mpi na ịdị mma ma ọ bụ nwee atụmatụ akọwapụtara nke ọma. Agbanyeghị, ọ bụ eziokwu na enwere ụzọ dị iche iche onye na -ede akwụkwọ amaghị ama nwere ike isi bipụta akwụkwọ ya. Enwebeghị ọtụtụ ohere na ohere dị ka ugbu a. Mgbe e bipụtasịrị ya, njem ga -amalite nke onye dere ya ga -etinye aka na ya. Obi abụọ adịghị ya, netwọkụ mmekọrịta bụ mkpakọrịta dị mkpa iji mee ka amara gị ma kwalite akwụkwọ gị. Anyị niile maara na ọ dịghị mfe yana onyinye a buru ibu, mana maka m, onye ọ bụla na -agụ akwụkwọ nke na -etinye oge na ego ha n'akwụkwọ gị bụ ihe nrite dị ebube Nke ahụ karịrị akwụghachi ụgwọ maka itinye ego.
N'ime obi m, nrọ m bụ ibipụta, n'ụzọ doro anya. Onye edemede na -ede n'ihi na ọ na -atọ ya ụtọ, n'ihi na ọ hụrụ oge ahụ ịnọdụ ala iji mepụta mkpụrụedemede na akụkọ, n'ihi na ọ chọrọ ya dịka iku ume. Mana, karịa ihe niile, dee ka ha gụọ ya, ka ndị ọzọ nwee ike nụ akụkọ ha.
Ọ bụ eziokwu na ibipụta akwụkwọ yiri ka m agaghị enweta. Ruo ogologo oge, m raara onwe m nye ide ihe na nzuzo, naanị di m maara. Ọ bụ onye na -agụ akwụkwọ mbụ m, ọ na -akatọ ya n'ụzọ kachasị mma, ọ bụ ya mere m ji tụkwasị ikpe ya obi. Mgbe ụfọdụ, ọ dị ihe ga -eme nke ga -akpali gị ibute nzọụkwụ mbụ. N'ọnọdụ m, ọ bụ mfu nke ndị m hụrụ n'anya abụọ n'ime obere oge. N'oge ahụ amaara m nke ọma na enwere isi na ndụ enweghị nloghachi. Mgbe ihe niile gwụsịrị, ị na -ewere ihe ị birila, ihe masịrị gị, ihe ị hụrụ n'anya. Echere m na achọghị m ịkwa ụta mgbe oge gafeworo nakwa na ọ nweghị ihe ga -efunahụ m site n'ịgbalị.
Ọ bụ eziokwu na enwere ọtụtụ ndị na -ede akwụkwọ ma na -achọ ibipụta, anyị ga -abụrịrị ndị eziokwu. Ọ bụ ọsọ dị anya n'ime ya ị ga -eme ihe, na -anọgidesi ike ma na -arụsi ọrụ ike n’ime ya.
MAAP: Anyị nọ n'oge dị mgbagwoju anya, ọ fọrọ nke nta ka m kwuo na n'oge mgbanwe. Dịka onye ọkọ akụkọ ihe mere eme, ama m na ọgba aghara na -eme, ọbụlagodi na ọ siri ike mgbe ị na -ebi ha, na emesịa oge dị mma na -abịa mgbe niile. Dịkarịa ala, a na m achọ ya maka ọgbọ ọhụrụ. Banyere akwụkwọ, nka ma ọ bụ egwu, ikekwe ọrụ ndị kacha dị egwu apụtala n'oge ọchịchịrị. Omenala bụ ọkụ, ọ na -azọpụta mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Oké Osimiri Aísa. Ajụjụ ọnụ onye edemede nke Who Seeen a Mermaid?